Chibaခ႐ိုင္မွာရွိတဲ့Nokogiri-yamaရဲ႕Nihon-deraChibaခရိုင်မှာရှိတဲ့Nokogiri-yamaရဲ့Nihon-dera | wafulu
Chibaခ႐ိုင္မွာရွိတဲ့Nokogiri-yamaရဲ႕Nihon-deraမွာေတာင္တက္ရင္းနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြကို ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းႏိုင္ပါတယ္. Nihon-deraကလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၁၃၀၀ခန႔္ကတည္းကတည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္.ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ရဲ႕ဘယ္ဘက္လက္ေတာ္မွာေဆးဗူးကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီးထိုေဆးဗူးကေရာဂါေတြကိုေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစတယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္.
Chibaခရိုင်မှာရှိတဲ့Nokogiri-yamaရဲ့Nihon-deraမှာတောင်တက်ရင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ဝတ်ပြုဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်. Nihon-deraကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၁၃၀၀ခန့်ကတည်းကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်တော်မှာဆေးဗူးကိုကိုင်ဆောင်ပြီးထိုဆေးဗူးကရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်.
You can worshipalot of big Buddha statues while climbing mountains at “ Nihon-dera” of “ Nokogiri-yama” in Chiba. “ Nihon-dera” was built about 1,300 years ago from now. It is said that Buddha statue holds medicine in the left hand, and it saves disease.
ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန် Hill if t…
snowed on Kamakura Great Buddhasnowed on Kamakura Great Buddha
ဒါဟာမေန႔က snowed ခဲ့သည္ ဒါဟာမနေ့က snowed…
မဂၤလာႏွစ္သစ္ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ယူနီကုဒ်ဖောင…
« Hatsushima Atami-shi
Musashinoၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Inokashiraပန္းၿခံMusashinoမြို့မှာရှိတဲ့ Inokashiraပန်းခြံ »